यर्मिया 23 ERV-NE - “त्यो भेंडा़ - Bible Gateway
23 “त्यो भेंडा़ गोठालाहरूलाई धिक्कार जसले मेरा भेंडा़हरूलाई ध्वंस र तितर-बितर पार्छ।” यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो।
2 ती गोठालाहरू (नेताहरू) मेरा मानिसका उत्तरदायीहरू हुन्। अनि इस्राएलका परमेश्वरले, यी कुराहरू ती गोठालाहरूलाई भन्नुहुन्छ “तिमी गोठालाहरूले मेरो बगाललाई चारै तर्फ भगाईदियौ। तिनीहरूलाई भाग्न वाध्य पार्यौ। अनि तिमीहरूले तिनीहरूलाई हेरचाह गरेनौ। तर मैले तिम्रो हेरचाह गरें। तिमीले गरेका दुष्ट कामहरूका निम्ति म दण्ड दिनेछु।” यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो।3“अब मैले अन्य देशहरू तिर खेदिएका बगाल भेला पार्छु र तिनीहरूलाई चर्ने खर्कमा ल्याउँछु। जब म मेरा बगाललाई चर्ने खर्कमा ल्याउँछु तिनीहरू लाभदायक बनिन्छन र संख्या बढछ।4म मेरा बगालको लागि नयाँ गोठाहरूलाई राख्नेछु। तिनीहरूले मेरो बगालको हेरचाह गर्नेछन्। अनि मेरा बगाल डराउने अथवा भयमीत हुने छैन। मेरो कुनै पनि बगाल हराउँने छैन।” यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो।
धार्मिक “हाँगा” [a]
5 यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो;
“हेर अब त्यो समय आइरहेछ,
कि म दाऊदको कुलमा एउटा धार्मिक ‘शाखा’ स्थापित गर्नेछु।
उसको ज्ञानले शासन चलाउनेछ,
र धर्म र न्याय गर्नेछ।
6 त्यस समयमा, यहूदाका मानिसहरूलाई बचाइनेछ,
अनि इस्राएलले सुरक्षित जीवन जिउनेछ।
उहाँको नाउँ यो हुनेछ,
‘परमप्रभु हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ’।
7 “यसकारण ती दिनहरू आइरहेछन्,” यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो, “जब मानिसहरूले भन्नेछैनन्, ‘जसरी परमप्रभु जीवित हुनुहुन्छ अनि यो उहाँ नै हुनहुन्छ, जसले इस्राएलका मानिसहरूलाई मिश्र भूमिबाट बाहिर ल्याउनु भयो।’ 8 तर मानिसहरूले केही नयाँ कुरा भन्ने छन्। तिनीहरूले भन्ने छन्, ‘जसरी परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, परमेश्वर मात्र हुन् जसले इस्राएलका मानिसहरूलाई उत्तर-भूमिबाट ल्याउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई सम्पूर्ण राज्यहरूबाट ल्याउनु भयो जहाँ उहाँले तिनीहरूलाई पठाउनु भएको थियो।’ त्यसपछि इस्राएलका मानिसहरू तिनीहरूका आफ्नै भूमिमा बस्नेछन्।”
झूटा अगमवक्ताहरूका विरूद्ध न्याय
9 अगमवक्ताहरूलाई सन्देश
अन्तस्करणमा मेरो हृदय भाँचेको छ।
मेरो सबै हड्डीहरू कामिरहेकाछन्।
यो परमप्रभुको र उहाँको पवित्र वचनको कारणले हो।
म मतवाला मानिस जस्तै भएकोछु।
10 यहूदाका भूमि यस्ता मानिसहरूले भरिएकोछ
जो व्यभिचारीहरू छन्।
यसर्थ परमप्रभुले यस भूमिलाई श्राप दिनुभयो।
अनि खर्क मरुभूमिमा परिणत भएकोछ।
अगमवक्ताहरू दुष्ट छन्।
ती अगमवक्ताहरूले आफ्ना प्रभाव
र शक्ति गल्ती गरी प्रयोग गर्दछन्।
11 “अगमवक्ता अनि पूजाहारी दुवै पापीहरू छन्।
तिनीहरूको दुष्ट्याईं मैले मेरो मन्दिरमा देखेकोछु।
12 यसकारण, म तिनीहरूलाई मेरो सन्देश दिन रोक्नेछु।
तिनीहरूको बाटो अन्धकारले ढाकेको चिप्लो हुनेछ
अनि तिनीहरू कालो अन्धकारमा झर्नेछन्।
म ती पूजाहारीहरू
विपद ल्याइ सजाय दिनेछु।”
13 “मैले सामरियामा अगमवक्ताहरूलाई
अगमवाणी दिएर नराम्रो काम गरिरहेकोछु।
बाल देवताको नाउँमा तिमीहरूले इस्राएलका मानिसहरूलाई पथभ्रष्ट गराए।
14 मैले यहूदाका अगमवक्ताहरू डरलाग्दो कामहरू गरिरहेको देखेकोछु।
तिनीहरूलाई व्यभिचारपूर्ण कर्ममा लिप्त छन्।
तिनीहरू झूटो बोल्छन् अनि दुष्ट मानिसहरूलाई सहयोग दिन्छन्।
त्यही कारणले मानिसहरूले दुष्ट काम गर्न रोकिदैनन्।
तिनीहरू सदोमका मानिसहरू जस्ता छन्।
अब यरूशलेम मेरो निम्ति गोमोरा जस्तै भएकोछ।”
15 यसकारण सेनाहरूका परमप्रभुले ती अगमवक्ताहरूका बारेमा भन्नुहुन्छ
“म ती अगमवक्ताहरूलाई तितो भोजन खाने
र विष हालेको पानी पिउने बनाउनेछु
किनभने यरूशलेमका अगमवक्ताहरू देखि
सम्पूर्ण देश नै दूषित पार्दैछन्।”
16 सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ
“ती अगमवक्ताहरूका कुरामा ध्यान नदेऊ
ती अगमवक्ताहरूले तिमीहरूलाई मूर्ख बनाउने कोशिश गरिरहेकाछन्।
ती अगमवक्ताहरूले जुन दर्शनहरू बताइरहेका छन्
ती सब तिनीहरूको आफ्नै सृष्टिहरू हुन्।
तिनीहरूले ती दर्शनहरू परमप्रभुबाट प्राप्त गरेका होइनन्।
17 कतिपय मानिसहरूले परमेश्वरबाट आएको सन्देशलाई उपेक्षा गर्दछन्।
अत ती अगमवक्ताहरूले ती मानिसहरूलाई
बेग्ला बेग्लै सन्देश दिन्छन्।
तिनीहरूले मलाई जसले निन्दा गर्छन् तिनीहरूलाई भन्छन्,
परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, ‘तिमीले शान्ति पाउँछौ।’
तिनीहरूले ज-जसको हृदय कठोर छ तिनीहरूलाई भन्छन्,
‘तिमीहरूमाथि अनिष्ट हुने छैन्।’
18 तर ती मध्ये कुनै पनि अगमवक्ताहरू दैवीय महासभामा उभिने होइन।
ती मध्ये कसैले पनि परमप्रभुको संदेश
न देखेको छन्, सुनेको नै छ।
19 अब परमप्रभुबाट हुने दण्ड तूफान जस्तो आउने छ।
परमप्रभुको क्रोध आँधी-तूफान जस्तो हुनेछ।
यो ती दुष्ट मानिसहरूका टाउकोहरूमाथि भुमरीको झोक्का ठोकिनेछ।
20 आफ्ना मनले चिताएको योजनाहरू सिद्ध नहोउन्जेल
परमप्रभुको रीस थामिने छैन।
तिमीहरूले त्यो छर्लङ्ग बुझ्नेछौ।
21 मैले ती अगमवक्ताहरूलाई पठाएको होइन।
तर तिनीहरू भागेर गए।
तिनीहरूसँग बोलेको छैन।
तर तिनीहरूले अगमवाणी दिए।
22 तर यदि तिनीहरू मेरो महासभामा बसेका भए,
तिनीहरूले मेरो यहूदाका मानिसहरूलाई मेरो सन्देशहरू भन्ने थिए।
तिनीहरूले ती मानिसहरूलाई नराम्रो कामहरू
गर्न देखि रोक्न सक्थे।”
23 “म परमेश्वर हुँ, जो नजिक छु,”
“म त्यो परमेश्वर होइन जो टाढोमा छ।
24 मैले देख्न सक्तिन भन्ने विचारमा
एउटा मानिसले आफैंलाई लुकाउनँ सक्ला।
तर यो मूर्खता हो।
के म स्वर्ग र पृथ्वी भर्दिनँ र?”
परमप्रभुले यसो भन्नुभयो: 25 “त्यहाँ त्यस्ता अगमवक्ताहरू छन् जसले मेरो नाउँ झूटा प्रचार गरिरहेछन्। तिनीहरू भन्छन्, ‘मैले सपना देखेको छु। मैले सपना देखेको छु।’ मैले तिनीहरूले त्यस्तो कुराहरू गरेको सुनें। 26 कहिले सम्म यी अगमवक्ताहरूले झूटो र आफ्नो माया प्रचार गरिरहने? 27 ती अगमवक्ताहरूले मेरो नाउँ मानिसहरूबाट भुलाउनु प्रयास गरिरहेकाछन् जसरी आफ्ना पिता-पुर्खाहरूले सपनाहरू भनेर भुलेका थिए। तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरूले बाल देवतालाई पूजे। 28 पराल गहुँ भन्दा भिन्दै हुन्छ। अगमवक्ताहरूले जसकहाँ सपना छ त्यही सपना विषयमा बोलुन्। जसकहाँ मेरा वचनहरू छन् साँचो गरी भनुन। 29 मेरो सन्देश आगो जस्तै छ।” यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो, “यो मार्तोल जस्तो छ जसले ढुङ्गा चुरचुर पारेर फुटाउँदछ।”
30 “यसर्थ म झूटा अगमवक्ताहरूको विरूद्धमा छु।” यो सन्देश परमप्रभुको हो “ती अगमवक्ताहरूले मेरा शब्दहरू एका-अर्काबाट चोरिरहेका छन्। 31 म झूटो अगमवक्ताहरूको विरूद्ध छु।” यो सन्देश परमप्रभुको हो, “तिनीहरूले आफ्नै शब्दहरू चलाउँछन् र मेरोबाट आएको सन्देश भनेर बाहना गर्दछन्। 32 म झूटा अगमवक्ताहरूका विरूद्ध छु जसले झूटो सपनाहरू प्रचार गर्छन्।” यो परमप्रभुको सन्देश हो। “तिनीहरूले मेरा मानिसहरूलाई झूटो शिक्षा दिदैं कुबाटो तिर लैजादैछन्। न त मैले तिनीहरूलाई पठाएँ न मेरो पक्षमा बोल्नु भनी आदेश दिएँ। तिनीहरूले कदापि यहूदाका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सक्तैनन्।” यो परमप्रभुको सन्देश हो।
परमेश्वरबाट उदास सन्देश
33 “यहूदाका मानिसहरू अथवा अगमवक्ताहरू, अथवा पूजाहारीहरूले तिमीलाई सोध्न सक्छ, ‘परमप्रभुले के-के भारी बोकाउनु भयो?’ तब तिमीहरूले तिनीहरूलाई उत्तर दिन्छौ र भन्छौ, ‘तिमीहरू अत्यन्तै गह्रौं बोझ हौ र म तिमीहरूलाई फ्याँक्नेछु।’ यो परमप्रभुको सन्देश हो।
34 “यदि अगमवक्ता अथवा पूजाहारी अथवा कुनै मानिसले परमप्रभुको बोझ विषयमा कुरा गर्छ भने, ‘म उसका परिवार र उसलाई सजाय दिनेछु।’ 35 यो कुरा तिमीहरू एकार्कालाई भन्नेछौ ‘परमप्रभुले के जवाफ दिनुभयो?’ अथवा ‘उहाँले के भन्नुभयो’? 36 तर तिमीले फेरि ‘परमप्रभुको बोझ’ भन्ने छैनौ किनभने ‘बोझ’ प्रत्येकको आफ्नै शब्द बनिएको हो। तर तिनीहरूलाई भन, ‘तिनीहरूले जीवित परमेश्वर, सेनाहरूका परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको वचन बङग्याएको छौ।’
37 “यदि परमप्रभुको सन्देश तिमी सिक्न चाहन्छौ भने, अगमवक्तालाई सोध, ‘परमप्रभुले तिमीलाई के जवाफ दिनु भयो?’ अथवा ‘परमप्रभुले के भन्नुभयो?’ 38 तर तिमीले नभन परमप्रभुबाट के भारी बोझ थियो। यदि तिमीले यो शब्द प्रयोग गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीलाई यी शब्दहरू भन्नु हुनेछ ‘तिमीले मेरो वचनलाई परमप्रभुको भारी नभन्नु पर्थ्यो। मैले तिमीलाई यो शब्द नभन्नु भनें। 39 मैले तिमीहरू र तिम्रा पिता-पुर्खाहरूलाई दिएको शहर र तिमीलाई माथि उचालेर म देखि पर फ्याँक्ने छु। 40 म तिनीहरूमाथि सदा-सर्वदा रहने लाज ल्याउनेछु। आफ्नो बेइज्जिती तिमीहरू कहिल्यै भुल्ने छैनौं।’”
यर्मिया 23:5 “हाँगा” दाऊद परिवारको एक नयाँ राजा।